Ny iPhone 6s mavokely mamafa ny tahiry | Vaovao IPhone
Ny iPhone 6s Plus Rose Gold, eny an-dàlana ho mpivarotra tsara indrindra
Natao nihira izy io fa ny loko vaovao amin'ny iPhones dia hiteraka fahatsapana manokana. Vitsy ny olona sosotra tamin'ny tambajotra sosialy taorian'ny nanambaran'i Apple fa ireo iPhone vaovao dia mety ho tonga amin'ny volamena raozy, Fa ny marina dia orinasa lehibe toa izany no tsy manao ireo zavatra ireo raha tsy misy fandalinana tsena goavana ao ambadik'izany.
Tamin'ny andro nitokanana ny mialoha fivarotana tany amin'ny firenena voalohany misy ireo fitaovana ireo dia afaka nahita izahay tranonkala iray izay nampiseho taminay ny baiko voaray any amin'ny firenena samihafa, manavao azy ireo tsindraindray. Noho izany, mangataka izahay mba hahitana ny fomba iPhones 6s Plus miloko volamena miloko Varotra haingana tany amin'ny firenena Aziatika izy ireo tao amin'ilay lisitra, ka tsy azo namidy tamin'ny 25 tao anatin'ny fotoana fohy.
Rehefa nandeha ny andro dia nanamarina izahay fa tsy ny any Azia ihany no mandresy ny iPhone 6 Plus amin'ny lafiny iray, fa ny fivarotana an'ity modely ity dia mivelatra amin'ny faritany sisa, araka ny hitantsika ankehitriny ao amin'ilay tranonkala. Aza adino koa izany tsy fantatray ny tahirin'ny maodely marina tsirairay, noho izany, ny fihenan'ny maodely sasany aloha dia mety tsy dia misy dikany loatra raha toa ka kely kokoa noho ny an'ny hafa ny tahiry.
Tsy maintsy miandry hatramin'ny volana Oktobra isika raha hijery raha toa ny firenena sisa amin'ny vondrona faharoa (izay antenaintsika hoe Espana) manao fampisehoana ary koa amin'ireo firenena voalohany ireo ary ny iPhone mavokely dia iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra, na eo aza ny vinavinan'ny ratsy Ny sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Ny iPhone 6s Plus Rose Gold, eny an-dàlana ho mpivarotra tsara indrindra
Jereo ny fotoana lasa…. ary efa nanam-potoana nanalana ireo tadiny fotsy ireo ny paoma !! mampihoron-koditra ny finday ao ambadika any !!
MiguelMP dia hoy izy:
Ny loko mavokely izay nalain'ny paoma dia tena fahombiazana.
Valiny amin'i MiguelMP
Eny, ireo kapoka fotsy ireo raha tiako izany. Ny zavatra tsy tiako ary mieritreritra aho fa zavatra tsy dia hampihomehy ny mpanjifa hafa izany, satria 100 mha ambany kokoa ny bateria noho ilay teo alohany ... 🙁
tsara ny dian-kapoka ...
Toy ny nitranga tamin'ny volamena ilay izy, noheverina ho tsotra ny zava-drehetra, raha hitan'izy ireo fa maizina sy mahonon-tena kokoa ny tanana eo amboniny noho ny amin'ny sary, izay mahafatifaty tokoa. Safidiko voalohany io, raha tsy izany dia tsy maintsy mandeha amin'ny volafotsy aho.